သိထားသင့်သော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်ဥပဒေတစ်ချို့ | Working Friends
သိထားသင့်သော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်ဥပဒေတစ်ချို့
2017年12月18日 2017年12月28日 EM
ဂျပန်ကုမ္ပဏီက နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို အလုပ်ခန့်အပ်တဲ့အခါ ဒီလိုအချက်တွေနှင့်အညီ ခန့်ရပါတယ်တဲ့။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေနှင့် ညှိကြည့်ပေါ့နော်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏အခြေခံအလုပ်ဥပဒေမှ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ၊နိုင်ငံခြားသားခန့်အပ်ခြင်း၊အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေတွေ အရ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ချွင်းချက်လည်း ရှိပေမဲ့ ဒီနည်းတွေကိုပဲ အခြေခံပြီး သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့။
ကုမ္ပဏီဘက်မှ လိုက်နာရမယ့် အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက ဒီလို ဥပဒေကျင့်သုံးနေလား???
နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းရဲ့ မိခင် နိုင်ငံက ဂျပန်ထက် မြင့်နေပါစေ၊နိမ့်နေပါစေ၊ ဥပဒေပိုင်း မတူညီပါစေ ၊နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြားအလုပ်ခိုင်းခြင်း မပြုရပါတဲ့။
ဘယ်နိုင်ငံသားမို့လို့ ဒါပဲ လုပ်ဆိုတာမျိုးကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ အားလုံး တန်းတူလုပ်ကိုင်ရမှာပေါ့နော်။ အဓိကကတော့ လူမျိုးရေး မခွဲခြားဖို့ပါတဲ့။
၂။ အလုပ်အမျိုးအစားကို တိတိကျကျ ရှင်းလင်းဖော်ပြရပါမယ်။
အလုပ်စာချုပ်သည့်အခါ အလုပ်လစာ၊အလုပ်ချိန်စသည်တို့ကို အလုပ်လုပ်မယ့် နိုင်ငံခြားသားကို အလုံးစုံ အတိအကျ အသိပေးရပါမယ်။
အထူးသဖြင့် လစာငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်ပါက စာရွက်စာတမ်းနှင့်တကွ ရှင်းလင်းဖော်ပြရမယ်တဲ့။
ဒါ့ကြောင့် အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ လစာ၊အလုပ်ချိန်စသည်တို့ကို ရေးသားထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို စစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ကိုယ့်ဘက်ကလည်း သေချာစစ်၊ အဲ့ဒါမှ အမှားမပါမှာလေနော်။
၃။ အတင်းအဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ငွေကြေးကြားဖြတ်ယူခြင်း မပြုလုပ်ရပါ
အလုပ်ခန့်တဲ့သူ (ကုမ္ပဏီ) ဘက်မှ မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ် အတင်းအဓမ္မအလုပ်လုပ်ခိုင်းခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်အလုပ်ခိုင်းခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရဲ့ အလိုဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အလုပ်ခိုင်းစေခြင်း မပြုရပါ။
ပြီးတော့ အလုပ်ရှင်ဘက်မှ အလုပ်ဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းဆီမှ ပွဲခဖြတ်ယူတာမျိုး မလုပ်ရဘူးတဲ့။
ဝန်ထမ်းရဲ့ အာမခံကြေးနဲ့ အခွန်နှုန်းတွေ ဖြတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။
၄။စာချုပ်သက်တမ်း မပြည့်ခင် အလုပ်ထွက် နစ်နာကြေးစာချုပ်၊ဝန်ခံကတိ မတောင်းရ
အကယ်၍ စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်ခင် အလုပ်ထွက်ခဲ့ပါက ငွေလျော်ပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိတောင်းခြင်းများ၊နစ်နာကြေးပေးဆောင်ရမည်ဟု စာချုပ်ချုပ်ထားခြင်းကို တားမြစ်ထားပါတယ်။
ဒါက ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းက ကုမ္ပဏီတွေ လိုက်နာရတဲ့ ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်ပ အလုပ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေပြောင်းနိုင်ပါတယ်နော်။
၅။ အလုပ်အတွင်း ထိခိုက်ရှနာဖြစ်၍ ဆေးကုသမှုခံယူနေသော ဝန်ထမ်းအား အလုပ်ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ
အလုပ်တာဝန်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ နာမကျန်း ဖြစ်လို့ ဆေးကုသမှုခံယူ အလုပ်နားခွင့်ယူနေစဉ်နှင့် အလုပ်ခွင့်ယူပြီး ရက်၃၀ အတွင်း အလုပ်မဖြုတ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
သေချာ ကုသပေးရတာပေါ့နော်။ ပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုမှ ဖြုတ်တန်ဖြုတ်ရပါတယ်တဲ့။
၆။ အလုပ်ဖြုတ်လျှင် ရက်၃၀နှင့်အထက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးရမယ်
အလုပ်သမားကို အလုပ်ဖြုတ်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ချက်က ရက်၃၀နှင့်အထက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးရပါမယ်။
ရက်၃၀ထက် နောက်ကျပြီး အကြောင်းကြားခဲ့ရင် နောက်ကျတဲ့ရက်အရေအတွက်ရဲ့ အလုပ်ခကို ပေးချေရမယ်တဲ့။
ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက်အနေနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်သင့်ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းကြောင့် လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိုင်ဘဲ အလုပ်ဖြုတ်ရတဲ့အချိန်နှင့် ဝန်ထမ်းမှာ အပြစ်ရှိခဲ့လို့ ဖြုတ်ရတဲ့အခါဆိုရင်တော့ ငွေပေးချေစရာမလိုပါဘူးတဲ့။
အလုပ်ခကို ငွေကြေးပုံစံဖြင့် တစ်လကို တစ်ကြိမ်နှင့် အထက် သတ်မှတ်ရက်မှာ ပေးချေပေးရပါမယ်။(ပစ္စည်းအစားထိုးပေးချေခြင်းမပြုရ)
တစ်ဖန် ဝင်ငွေပမာဏအလိုက် အခွန်ငွေ၊အာမခံကြေးစတဲ့ အလုပ်ဝန်ထမ်းဘက်မှ ပေးဆောင်ရမယ့်ပမာဏကို အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ပေးချေပေးနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ဝန်ထမ်းအလုပ်ထွက်သည့်အခါ ပေးချေဖို့ကျန်ရှိတဲ့ အလုပ်ခကို လစာပမာဏ တောင်းဆိုပြီး ၇ရက်အတွင်း ပေးချေပေးရပါတယ်။
၈။ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ
အလုပ်ဝန်ထမ်းအတွက် လုပ်ခကို အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ၊ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခအထက် ပေးချေပေးရပါမယ်။ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခက နယ်မြေဒေသအလိုက် နှုန်းထားကွာခြားပြီး၊
တိုကျိုမြို့ရဲ့ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခက တစ်နာရီ ၉၅၈ယန်း ဖြစ်ပြီး၊ အိုဆာကာမြို့မှာတော့ အနိမ့်ဆုံးတစ်နာရီ ၉၀၉ယန်းပါတဲ့နော်။ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူပါဘူး။
ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ချိန်ကတော့ ၁ရက်ကို အလုပ်လုပ်ချိန်(၈)နာရီ၊ ၁ပတ်လျှင် နာရီ၄၀ (အချို့သော အလုပ်များတွင် တစ်ပတ် ၄၄နာရီ)သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
သတ်မှတ်နားရက်ကတော့ အနည်းဆုံး ၁ပတ်လျှင် ၁ရက်၊ ၄ပတ်လျှင် ၄ရက်နှင့်အထက် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၁၀။ သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်ပြင်ပ၊အလုပ်နားရက်တွင် ၊ ညနက်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ
သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်ပြင်ပနှင့် အလုပ်နားရက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်စေလိုပါက စာရွက်စာတမ်းတင်ပြပေးရပါမယ်။
တစ်ဖန် အလုပ်ချိန်ပြင်ပအတွင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း (သို့) အချိန်ပိုဆင်းခြင်း အတွက် ထိုနေ့လုပ်ခ၏ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ပေးဆောင်ရပြီး၊
ညနက်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ (ည၁၀နာရီမှ မနက် ၅နာရီအထိ) လုပ်ခ၏ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းအထက် အချိန်ပို ကြေးပေးဆောင်ပါတယ်တဲ့။
အချိန်ပို လုပ်ထားတာတောင် ငွေရှင်းမပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ ブラック企業 (sweatshop) ဆိုပြီး အမည်ဆိုး တွင်တာပေါ့။
အလုပ်ဝင်ပြီး ၆လကြာပြီးနောက် ၊အလုပ်ဆင်းသည့်ရက် ၈၀ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီခဲ့ပါလျှင် နှစ်ပြည့်ခွင့် စတင်ခံစားရပါမယ်။ ၆လသက်တမ်းဆိုရင် ၁၀ရက် နှစ်ပြည့်ခွင့်ပါ။
၁၂။ ငွေကြေးပြဿနာ မဖြစ်ရလေအောင်
ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတိုင်း မိမိရဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင် နေထိုင်ခွင့်ကတ် ၊ my number ကဒ်ကို အမြဲဆောင်ထားရပါမယ်။
တခြားသူကို အပ်နှံထားတာမျိုး မလုပ်ရပါ။ အပြင်ခဏသွားရင်တောင် နေထိုင်ခွင့်ကတ် 在留カード resident card မပါမဖြစ် ယူသွားရပါတယ်။
ကုမ္ပဏီကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေ အကုန်ပေးထားရပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့ သတ်မှတ်အချိန်အလိုက် လစာငွေ ပေးချေရပြီး၊ အလုပ်ဝန်ထမ်းအလုပ်ထွက်သည့်အခါ အလုပ်ခပမာဏတောင်းခံပြီး ၇ရက်အတွင်း ပေးရန်လိုအပ်သည့် ငွေကြေး၊ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပေးဆောင်ရပါတယ်။
အလုပ်ဝန်ထမ်းရဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရန် ဝန်ထမ်းအား အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အလုပ်၊ကျန်းမာရေးဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေခြင်း ကို တားမြစ်ထားပြီး၊
ဝန်ထမ်း ကျန်းမာလုံခြုံရေးအတွက် ပညာပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးစေခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဂျပန်မှာက ဒီလို နည်းဥပဒေလေးတွေ သတ်မှတ်ထားတော့ အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သေချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဒီ့ထက်လည်း ဥပဒေထုတ်ထားတွေ ရှိပါသေးတယ်။
“ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်” ဆိုသလို သူတို့ရဲ့ စည်းမျဉ်းကိုတော့လိုက်နာရမှာပေါ့နော်။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းလိုက်နာရသလို၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း လိုက်နာရမှာပေါ့။
သူငယ်ချင်းတို့လည်း အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေပါစေ။
ဂပြနျကုမ်ပဏီက နိုငျငံခွားသားတဈယောကျကို အလုပျခနျ့အပျတဲ့အခါ ဒီလိုအခကျြတှနှေငျ့အညီ ခနျ့ရပါတယျတဲ့။
ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ဥပဒဖွေဈတဲ့အတှကျ ဂပြနျနိုငျငံတှငျးလုပျမယျဆိုရငျတော့ ဒီအခကျြတှနှေငျ့ ညှိကွညျ့ပေါ့နျော။
ဂပြနျနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျမယျဆိုရငျ ဂပြနျနိုငျငံ၏အခွခေံအလုပျဥပဒမှေ သတျမှတျထားတဲ့ အကွောငျးအခကျြတှေ၊နိုငျငံခွားသားခနျ့အပျခွငျး၊အလုပျလုပျခွငျးဆိုငျရာ နညျးဥပဒတှေေ အရ ကနျ့သတျထားပါတယျ။
ခြှငျးခကျြလညျး ရှိပမေဲ့ ဒီနညျးတှကေိုပဲ အခွခေံပွီး သတျမှတျပါတယျတဲ့။
ကုမ်ပဏီဘကျမှ လိုကျနာရမယျ့ အပိုငျးဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီက ဒီလို ဥပဒကေငျြ့သုံးနလေား။???
နိုငျငံခွားသားဝနျထမျးရဲ့ မိခငျ နိုငျငံက ဂပြနျထကျ မွငျ့နပေါစေ၊နိမျ့နပေါစေ၊ ဥပဒပေိုငျး မတူညီပါစေ ၊နှိုငျးယှဉျခှဲခွားအလုပျခိုငျးခွငျး မပွုရပါတဲ့။
ဘယျနိုငျငံသားမို့လို့ ဒါပဲ လုပျဆိုတာမြိုးကို ကနျ့သတျထားပါတယျ။ အားလုံး တနျးတူလုပျကိုငျရမှာပေါ့နျော။ အဓိကကတော့ လူမြိုးရေး မခှဲခွားဖို့ပါတဲ့။
၂။ အလုပျအမြိုးအစားကို တိတိကကြ ရှငျးလငျးဖျောပွရပါမယျ။
အလုပျစာခြုပျသညျ့အခါ အလုပျလစာ၊အလုပျခြိနျစသညျတို့ကို အလုပျလုပျမယျ့ နိုငျငံခွားသားကို အလုံးစုံ အတိအကြ အသိပေးရပါမယျ။
အထူးသဖွငျ့ လစာငှကွေေးနှငျ့ ပတျသကျပါက စာရှကျစာတမျးနှငျ့တကှ ရှငျးလငျးဖျောပွရမယျတဲ့။
ဒါ့ကွောငျ့ အလုပျလြှောကျတဲ့အခါ လစာ၊အလုပျခြိနျစသညျတို့ကို ရေးသားထားတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှကေို စဈဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ကိုယျ့ဘကျကလညျး သခြောစဈ၊ အဲ့ဒါမှ အမှားမပါမှာလနေျော။
၃။ အတငျးအဓမ်မအလုပျခိုငျးစခွေငျး၊ငှကွေေးကွားဖွတျယူခွငျး မပွုလုပျရပါ
အလုပျခနျ့တဲ့သူ (ကုမ်ပဏီ) ဘကျမှ မသကျဆိုငျတဲ့အလုပျ အတငျးအဓမ်မအလုပျလုပျခိုငျးခွငျး၊ခွိမျးခွောကျအလုပျခိုငျးခွငျး၊
ဝနျထမျးရဲ့ အလိုဆန်ဒနဲ့ ဆနျ့ကငျြတဲ့ မကောငျးတဲ့ အလုပျခိုငျးစခွေငျး မပွုရပါ။ မိမိအလုပျတာဝနျကိုတော့ သခြောလုပျရမှာပေါ့နျော။
ပွီးတော့ အလုပျရှငျဘကျမှ အလုပျဝငျခှငျ့ပေးတဲ့အတှကျ ဝနျထမျးဆီမှ ပှဲခဖွတျယူတာမြိုး မလုပျရဘူးတဲ့။
ဝနျထမျးရဲ့ အာမခံကွေးနဲ့ အခှနျနှုနျးတှေ ဖွတျတာနဲ့မဆိုငျဘူးနျော။
၄။စာခြုပျသကျတမျး မပွညျ့ခငျ အလုပျထှကျ နဈနာကွေးစာခြုပျ၊ဝနျခံကတိ မတောငျးရ
အကယျ၍ စာခြုပျသကျတမျးမကုနျခငျ အလုပျထှကျခဲ့ပါက ငှလြေျောပါမညျဟု ဝနျခံကတိတောငျးခွငျးမြား၊နဈနာကွေးပေးဆောငျရမညျဟု စာခြုပျခြုပျထားခွငျးကို တားမွဈထားပါတယျ။
ဒါက ဂပြနျနိုငျငံတှငျးက ကုမ်ပဏီတှေ လိုကျနာရတဲ့ ဥပဒဖွေဈတဲ့အတှကျ ပွညျပ အလုပျဆိုရငျတော့ ဥပဒပွေောငျးနိုငျပါတယျနျော။
၅။ အလုပျအတှငျး ထိခိုကျရှနာဖွဈ၍ ဆေးကုသမှုခံယူနသေော ဝနျထမျးအား အလုပျဖွုတျခွငျးမပွုလုပျရ
အလုပျတာဝနျအတှငျး ထိခိုကျဒဏျရာရ နာမကနျြး ဖွဈလို့ ဆေးကုသမှုခံယူ အလုပျနားခှငျ့ယူနစေဉျနှငျ့ အလုပျခှငျ့ယူပွီး ရကျ၃၀ အတှငျး အလုပျမဖွုတျဖို့ သတျမှတျထားပါတယျ။
သခြော ကုသပေးရတာပေါ့နျော။ ပြောကျကငျးသှားပွီဆိုမှ ဖွုတျတနျဖွုတျရပါတယျတဲ့။
၆။ အလုပျဖွုတျလြှငျ ရကျ၃ဝနှငျ့အထကျကွိုတငျအကွောငျးကွားပေးရမယျ
အလုပျသမားကို အလုပျဖွုတျတဲ့အခါ သတျမှတျခကျြက ရကျ၃ဝနှငျ့အထကျကွိုတငျအကွောငျးကွားပေးရပါမယျ။
ရကျ၃ဝထကျ နောကျကပြွီး အကွောငျးကွားခဲ့ရငျ နောကျကတြဲ့ရကျအရအေတှကျရဲ့ အလုပျခကို ပေးခရြေမယျတဲ့။
ဒါပမေဲ့ ခြှငျးခကျြအနနှေငျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျသငျ့ခွငျး စတဲ့ အကွောငျးကွောငျ့ လုပျငနျးမလညျပတျနိုငျဘဲ အလုပျဖွုတျရတဲ့အခြိနျနှငျ့ ဝနျထမျးမှာ အပွဈရှိခဲ့လို့ ဖွုတျရတဲ့အခါဆိုရငျတော့ ငှပေေးခစြေရာမလိုပါဘူးတဲ့။
အလုပျခကို ငှကွေေးပုံစံဖွငျ့ တဈလကို တဈကွိမျနှငျ့ အထကျ သတျမှတျရကျမှာ ပေးခပြေေးရပါမယျ။(ပစ်စညျးအစားထိုးပေးခခြွေငျးမပွုရ)
တဈဖနျ ဝငျငှပေမာဏအလိုကျ အခှနျငှေ၊အာမခံကွေးစတဲ့ အလုပျဝနျထမျးဘကျမှ ပေးဆောငျရမယျ့ပမာဏကို အလုပျရှငျဘကျမှ ပေးခပြေေးနိုငျပါတယျ။
အလုပျဝနျထမျးအလုပျထှကျသညျ့အခါ ပေးခဖြေို့ကနျြရှိတဲ့ အလုပျခကို လစာပမာဏ တောငျးဆိုပွီး ရရကျအတှငျး ပေးခပြေေးရပါတယျ။
၈။ အနိမျ့ဆုံး လုပျခလစာ
အလုပျဝနျထမျးအတှကျ လုပျခကို အနိမျ့ဆုံးလုပျခလစာ၊ အနိမျ့ဆုံးလုပျခအထကျ ပေးခပြေေးရပါမယျ။
အနိမျ့ဆုံးလုပျခက နယျမွဒေသေအလိုကျ နှုနျးထားကှာခွားပွီး၊ လုပျငနျးအမြိုးအစားအလိုကျလညျး ကှာခွားပါသေးတယျ။
တိုကြိုမွို့ရဲ့ အနိမျ့ဆုံး လုပျခက တဈနာရီ ၉၅၈ယနျး ဖွဈပွီး၊ အိုဆာကာမွို့မှာတော့ အနိမျ့ဆုံးတဈနာရီ ၉၀၉ယနျးပါတဲ့နျော။ တဈနရောနဲ့ တဈနရော မတူပါဘူး။
ဥပဒအေရသတျမှတျထားတဲ့အလုပျခြိနျကတော့ ၁ရကျကို အလုပျလုပျခြိနျ(၈)နာရီ၊ ၁ပတျလြှငျ နာရီ၄၀ (အခြို့သော အလုပျမြားတှငျ တဈပတျ ၄၄နာရီ)သတျမှတျထားပါတယျ။
သတျမှတျနားရကျကတော့ အနညျးဆုံး ၁ပတျလြှငျ ၁ရကျ၊ ၄ပတျလြှငျ ၄ရကျနှငျ့အထကျ သတျမှတျထားပါတယျ။
၁၀။ သတျမှတျအလုပျခြိနျပွငျပ၊အလုပျနားရကျတှငျ ၊ ညနကျအလုပျလုပျသညျ့အခါ
သတျမှတျအလုပျခြိနျပွငျပနှငျ့ အလုပျနားရကျတှငျ အလုပျလုပျကိုငျစလေိုပါက စာရှကျစာတမျးတငျပွပေးရပါမယျ။
တဈဖနျ အလုပျခြိနျပွငျပအတှငျး အလုပျလုပျခွငျး (သို့) အခြိနျပိုဆငျးခွငျး အတှကျ ထိုနလေု့ပျခ၏ ၂၅ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ကို ပေးဆောငျရပွီး၊
ညနကျအလုပျလုပျသညျ့အခါ (ည၁ဝနာရီမှ မနကျ ၅နာရီအထိ) လုပျခ၏ ၂၅ရာခိုငျနှုနျးအထကျ အခြိနျပို ကွေးပေးဆောငျပါတယျတဲ့။ အခြိနျပို လုပျထားတာတောငျ ငှရှေငျးမပေးတဲ့ ကုမ်ပဏီကတော့ ブラック企業 (sweatshop) ဆိုပွီး အမညျဆိုး တှငျတာပေါ့။
အလုပျဝငျပွီး ၆လကွာပွီးနောကျ ၊အလုပျဆငျးသညျ့ရကျ ၈ဝရာခိုငျနှုနျး ပွညျ့မီခဲ့ပါလြှငျ နှဈပွညျ့ခှငျ့ စတငျခံစားရပါမယျ။
၆လသကျတမျးဆိုရငျ ၁ဝရကျ နှဈပွညျ့ခှငျ့ပါ။
၁၂။ ငှကွေေးပွဿနာ မဖွဈရလအေောငျ
ဂပြနျနိုငျငံမှာနထေိုငျတဲ့ နိုငျငံခွားသားတိုငျး မိမိရဲ့ နိုငျငံကူးလကျမှတျ၊ နိုငျငံခွားသားမှတျပုံတငျ နထေိုငျခှငျ့ကတျ ၊ my number ကဒျကို အမွဲဆောငျထားရပါမယျ။တခွားသူကို အပျနှံထားတာမြိုး မလုပျရပါ။
အပွငျခဏသှားရငျတောငျ နထေိုငျခှငျ့ကတျ 在留カード resident card မပါမဖွဈ ယူသှားရပါတယျ။ ကုမ်ပဏီကိုလညျး ကိုယျ့ရဲ့ အခကျြအလကျတှေ အကုနျပေးထားရပါတယျ။
ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ကတော့ သတျမှတျအခြိနျအလိုကျ လစာငှေ ပေးခရြေပွီး၊ အလုပျဝနျထမျးအလုပျထှကျသညျ့အခါ အလုပျခပမာဏတောငျးခံပွီး ရရကျအတှငျး ပေးရနျလိုအပျသညျ့ ငှကွေေး၊ပစ်စညျးမြားကို ပွနျလညျပေးဆောငျရပါတယျ။
အလုပျဝနျထမျးရဲ့ လုံခွုံရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေးကို ထိနျးသိမျးဖို့ရနျ ဝနျထမျးအား အန်တရာယျဖွဈစသေော အလုပျ၊ကနျြးမာရေးဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုကျစခွေငျး ကို တားမွဈထားပွီး၊ ဝနျထမျး ကနျြးမာလုံခွုံရေးအတှကျ ပညာပေးခွငျး၊ ကနျြးမာရေးစဈဆေးစခွေငျး တို့ကို ပွုလုပျဖို့ သတျမှတျထားပါတယျ။
ဂပြနျမှာက ဒီလို နညျးဥပဒလေေးတှေ သတျမှတျထားတော့ အလုပျလုပျတော့မယျဆိုရငျ သခြော စုံစမျးစဈဆေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ဒီ့ထကျလညျး ဥပဒထေုတျထားတှေ ရှိပါသေးတယျ။
“ရောမရောကျရငျ ရောမလိုကငျြ့” ဆိုသလို သူတို့ရဲ့ စညျးမဉျြးကိုတော့လိုကျနာရမှာပေါ့နျော။
ဂပြနျကုမ်ပဏီဘကျကလညျးလိုကျနာရသလို၊ ကိုယျကိုတိုငျလညျး လိုကျနာရမှာပေါ့။
သူငယျခငျြးတို့လညျး အလုပျအကိုငျ အဆငျပွပေါစေ။
Previous Previous post: သူတို့၏ ခေါက်ဆွဲပြုတ် ramen
Next Next post: ※Interview※ ရှင်သန်ခြင်း အနုပညာ_ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုက အရေးကြီးဆုံး！ဒီလိုလေးတွေ ပြင်ဆင်မယ်